Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1387
Fiantsonan’ny fiara : nanome safidy ny Easy Park
Par Taratra sur 08/02/2016 Divers, NS Malagasy
Tafiditra amin’ny fandaminana ny tanàna. « Nomenay safidy telo ny mpanjifa ho amin’ny fiantsonan’ny fiarakodia amin’ireo faritra filamatra anaovana andrana eto an-dRenivohitra », hoy ny tompon’andraikitry ny Easy Park, Rakotoson Manitra, afakomaly tetsy Behoririka. Eo ny famandrihana isan-taona omena isaky ny laharan’ny fiara, andoavana 750 000 Ar. Manampy izany ny tolotra isan’andro, andoavana 7 000 Ar. Farany ny 500 […]
Par Taratra sur 08/02/2016 Economie, NS Malagasy
Arahin’ny Banky iraisam-pirenena maso akaiky ny fomba fiasa eo amin’ny fitantanam-bolam-panjakana. Efa nametraka ny fepetra momba izany ny ao amin’ny filankevi-pitantanana. Mbola betsaka anefa ny tsy mazava, raha ny fanamarihana nataon’ny teknisianina iray. Tsiahivin’ny teknisianina amin’ny Banky iraisam-pirenena ny fepetra takin’izy ireo momba ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana eto Madagasikara. Fitantanana tsy mahomby no antony […]
Par Taratra sur 08/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Mitohy ny fankalazana ny faha-45 taon’ny Fikambanan’ny mpiara-mamaky Baiboly Malagasy (FMBM). Taorian’ny fanokafana ofisialy ny taon-jobily, tetsy amin’ny FJKM Isotry Fitiavana, ny asabotsy 30 janoary 2016 lasa teo, hitohy amin’ny alalan’ny « Sekolin’ny Baiboly » indray izany. Fotoana handalinana misimisy kokoa ny Baiboly, hanomboka anio hatramin’ny zoma ho avy izao, izay hotanterahina etsy amin’ny fiangonana Anglikana Avaratr’Anjoma, […]
Ny alin’ny asabotsy teo, 4’mi, mpatory an-tsena, tsy manan-kialofana anjatony avy amin’ny fianakaviana 96 teny an-tsisin-dalan’Antananarivo no nanaiky hiantrano etsy amin’ny foibe fampiantranoana ny tsy manan-kialfona etsy Ambalavao Isotry. Niandraiketan’ny minisiteran’ny mponina ny fandraisana an-tanana azy ireo tamin’izany fampiantranoina izany. Teny amin’ny tonelina Ambanidia ny fianakaviana 10 amin’izy ireo. Teny amin’ny tonelina Ambohidahy kosa ny […]
Fahalafosan’ny fidirana any Isalo : manomboka mihena ny fidiram-bolan’ny mponina
Tsy laharana voalohany mahasarika mpizahatany betsaka intsony ny valan-javaboary Isalo amin’izao fotoana izao. Efa lasa any amin’ny laharana fahefatra, angamba, raha ny fanamarihan’ny avy any an-toerana. 80 %-n’ny mponina manodidina io valan-javaboary io anefa mivelona amin’ny fizahantany, ohatra, ireo guide, mpanao asa tanana sy mpiasa any amin’ireo hotely manodidina. Vokatr’izany, manomboka mihena ny fidiram-bola amin’ireo […]
Vision Madagascar : hajaina ny fenitry ny fitrandrahana ala
Notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely ny faran’ny herinandro teo, ny fanolorana ny mari-pankasitrahana FSC ho an’ny Vision Madagascar izay antoka iray amin’ny fanajana ny fenitra amin’ny alalàn’ny fitrandrahana ny ala. Anisan’ny orinasa vaventy mitrandraka sy manodina hazo eto Madagasikara ny Vima Woods. Amina hektara maro ny alan’ity orinasa ity ao Moramanga. Mampiasa olona mivantana […]
«Cross Country Analamanga» : resin’i Marinah Ralisinirina
Par Taratra sur 08/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Tontosa ny asabotsy lasa teo teny Ambohidratrimo, ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, taranja «cross country». Nisongadina ny fandresena teo amin’ny vehivavy, izay nandavoan’i Marinah, avy amin’ny Cnaps Sport, an-dRalisinirina, atletan’ny 3FB, tompondakan’ny seksiona Analamanga, ho an’ny sokajy «sénior» vehivavy, izay nihazakazaka ny 10 km. Nitarika am-boalohany Ralisinirina ary narahin’i Marinah akaiky fotsiny. Nosongonany kosa […]
«Chan 2016» : nanofan’i Kabila fiaramanidina ireo mpijery Kongoley
Na firenena be olana ara-politika sy ao anatin’ny ady an-trano aza ny ao amin’ny Repoblikan’ny demokratikan’i Kongo, tsy manao ambanin-javatra ny baolina kitra ny fitondrana. Nanofan’ingahy, Joseph Kabila, filoham-pirenen’ny Repoblika demokratikan’i Kongo (RDC), fiaramanidina manokana, avy amin’ny kaompaniam-pitaterana Congo Airways, ireo mpijery kongoley, nandeha nijery ny famaranana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Chan 2016), […]
Kitra – «Chan 2016» : lasan’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire ny medaly alimo
Laharana fahatelo, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Chan 2016), ny Elefanta avy any Côte d’Ivoire. Norombahin’izy ireo izany ny medaly alimo. Resiny, teo amin’ny fiadian-toerana, tamin’ny isa tery, 2 noho 1, ny Syli Nacional avy any Ginea. Fihaonana notanterahina, omaly alahady, tao amin’ny kianja Amahoro, Kigali. Baolina roa tafiditr’i Youla, teo amin’ny minitra […]
Rugby – «VI Nations» : resin’i Frantsa ny Italianina
Tsara fanombohana ny Les Bleus, ekipam-pirenena Frantsay, teo amin’ny fanombohan’ny fifaninanana «Tournoi des VI Nations», eo amin’ny taranja rugby. Lavon’izy ireo, tamin’ny isa tery 23 noho 21 ny Squadra Azzurra, avy any Italita. Fihaonana natao ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny Stade de France. Na nivoaka ho mpandrey aza, tamin’ity ny Frantsay, dia tsy afa-po, […]
Fiainan’antoko : hampivaky ny antoko ny ady eo anivon’ny Leader Fanilo
Par Taratra sur 08/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Mitohy ny disadisa… Ho vaky ihany ny antoko Leader Fanilo, fa mamaly bontana ny eo anivon’ny birao nasionaly mpandrindra. Ny an’iza no marina? Mitohy ny disadisa eo anivon’ny antoko Leader Fanilo. Efa ady vaky aza… Nilaza ny komity mpihevi-draharaha, ny 3 febroary, fa haato ary miandry ny filankevi-pirenena kasaina hatao ao anatin’ny telo volana ny […]
Fanafoanana ny fifidianana loholona : nolavin’ny HCC ny fangatahan’ny Antoko Malagasy miara-miainga
Araka ny fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny 22 janoary, nitsara ny raharaha araka ny And. 132 amin’ny lalàm-pifidianana: ho an’ireo voasoratra amin’ny lisitry ny mpifidy, nandray anjara tamin’ny fifidianana, ny fanoherana ny fifidianana. Tsy azo raisina ny fanoherana ny fifidianana amin’ny anaran’ny antoko politika, na voasoratra ao amin’ny lisitry ny mpifidy na kandidà […]
Filoha teo aloha, Ravalomanana : « Tsy miampanga na iza na iza aho »
Nitondra fanazavana momba ny « Raharahan’ny 7 febroary » ny filoha teo aloha, Ravalomanana. « Tsy miampanga na iza na iza aho hoe iza no nitifitra, notifirina, nanome baiko sy ny nobaikoina… Tsy azo afenina ny marina ary tsy meloka aho. An-dry zareo ny fanamelohana ahy ho faty … Ny olana eto, samy mihevitra ho manana ny marina […]
Hifidy ny ho filohany ny Antenimierandoholona
Hivory manokana ny eo anivon’ny Antenimierandoholona, rahampitso etsy amin’ny lapan’Anosikely. Anisan’ny hiompan’ny dinika amin’izany ny fametrahana ny fitsipika anatiny sy ny hifidianana ireo handrafitra ny birao maharitra ka anisan’izany ny ho filohan’ity andrimpanjakana ity. Mifarana avy hatrany ny fivoriana raha vao vita ireo ary ny volana mey indray vao miverina mivory ara-potoana. Synèse R.
ESGN Moramanga : zandary 161 nahavita fiofanana SMP/BS1
Notanterahina, ny zoma 5 febroary 2016 tao amin’ny Sekoly ambonin’ny zandarimariam-pirenena Moramanga (ESGN) ny lanonana ara-miaramila namoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo andiany faha-27 SMP/BS1. Miisa 161 mirahalahy ireo zandary nahavita fiofanana tao amin’ny sekoly. Lanonana teo ambany fiahian’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Paza Didier. Nisolo tena azy, ny talen’ny kabinetran’ny Seg, ny […]
Par Taratra sur 08/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Randriamananjara Philibert no misolo toerana ny depiote teo aloha, Ramarosoa Emiline, tamin’ny lisitra Fitarikandro, tao Amparafaravola, araka ny fanapahan’ny HCC ny 3 febroary, nivoaka ny 5 febroary. Noho ny fahitana fahabangan-toerana izany, fa nametra-pialana ny depiote Ramarosoa Emiline, izay voafidy ho loholona, tamin’ny listra Mifanasoa, faritany Toamasina. Hanatrika ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia hatao eto Antananarivo, […]
Miandrivazo : vao mainka mirongatra ny ambalavelona
Mihamitombo hatrany ireo olona tratran’ny ambalavelona any Miandrivazo. Iaraha-mahita amin’ny sary izao ireo mpiandry mpanala devoly, afakomaly tao Miandrivazo. Ireo tanora sy ankizy no tena lasibatra amin’ity trangana aretina hafahafa ity. Hatreto tsy ahitam-panafahana izany fa mionona amin’ny fametrahan-tanana ataon’ny mpiandry izany. Na efa nigadra aza i Kohen izay voarohirohy ho tompon’antoka tamin’izany, vao mainka […]
Tsy mbola nanomboka akory ny fiofanana… : mpianatra ho zandary namoy ny ainy tany Ambositra
Namoy ny ainy sahady ny tovolahy iray mpianatra ho zandary, ny asabotsy teo tany amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena ao Ambositra. Tsy mbola nanomboka anefa ny fiofanana dia izao maty izao izy… Tovolahy iray antsoina hoe Rasolofoniaina Angelo Alexandre, mpianatra ho zandary ity namoy ny ainy tao Ambositra ity, ny asabotsy antoandro teo. Araka ny fanazavana […]
Fanafihana tao Ambohibe : vehivavy iray voatifitra…
Renim-pianakaviana iray voatifitra, fiara 4×4 iray sy trano dimy indray kila, vokatry ny fanafihana tao Ambohibe, Vavatenina, ny asabotsy alina teo. Fantatra fa jiolahy 10 nirongo basy sy nanao fanamian’ny mpitandro filaminana no nanafika mpandraharaha ara-toekarena iray. Voalaza fa vao avy nivarotra jirofo ity niharam-boina ka nihevitra ry zalahy fa misy volabe. 400 000 Ar anefa […]
Maty voatifitry ny zandary i Doris nandritra ny fisamborana azy tao Tsahavita, fokontany Hanahana, distrikan’i Vohibinany, ny zoma teo. Nomelohin’ny fitsarana, sazy 20 taona an-tranomaizina noho ny famonoana olona nataony, saingy nandositra ny fonjan’Ambalatavoahany Toamasina nitazomana azy izy, ny 9 novambra 2012. Nitohy hatrany ny fikarohana ity jiolahy ity taorian’izay. Ny 1 janoary 2016 lasa […]
Efa nampoizina ihany. Nangingina nefa koa nilamina ny fanamarihana ny tsingerin-taona fahafito ny 7 febroary 2009. Vao mainka nizara sy nivaky tanteraka anefa izany fahatsiarovana izany, omaly. Tonga vao maraina nametraka fehezam-boninkazo teny Antaninarenina ny avy amin’ny AV7, tarihin’i Boana Jean-Pierre. « Tsy azo ekena ny hanaovana fitaovana politika ireo niharam-boina sy hanaovana sorona indray ny […]
Par Taratra sur 08/02/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Sports
Nivarahontsana ary sanganehana tanteraka izay naheno ny vaovao. Maty nananton-tena, tao an-tranony, eny Ivandry i Bob Kely, mpilalaon’ny Barea de Madagascar. Voalaza fa noho ny famoizam-po, fahakiviana noho tsy fikarakarana azy, tao anatin’ny aretiny, no anton’izany. Hatairana ny an’ny fianakaviana sy ny mpiara-monina ary indrindra, ny tontolon’ny baolina kitra fa nodimandry i Njilamanana Yvon […]
Cnaps sy Dinec : filankevitry ny sekoly tany Farafangana
Par Taratra sur 06/02/2016 Economie, NS Malagasy
Nitohy ny 3-5 febrary teo, tany Farafangana, ny fiaraha-miasan’ny Tahirim-pirenena ho an’ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) sy ny Fitantanana ny sekoly katolika (Dinec), hampahafantarana ny fiahiana ara-tsosialy, ho an’ny taona 2016. Voakasik’izany ny diosezy 10, nampahafantarana ny lalàna mifehy asa sy ny fiahiana ara-tsosialy, ny fanampiana omen’ny Cnaps ny mpiasa sy ny fiankaviany, ny fandraisana an-tanana […]
« Précédent 1 … 1 385 1 386 1 387 1 388 1 389 … 1 420 Suivant »